I-China iLincomycin hydrochloride inaliti 10% Imveliso kunye neFektri | Iqela leqela leTypt
Lincomycin hydrochloride inaliti
I-ml nganye iqulethe:
Isiseko seLincomycin ………………………………… ..… 100mg
Intengiso yabamkeli …………………………… 1ml
ILincomycin Hydrochloride isetyenziselwa ukunyanga i-bacterium eqinisekileyo ye-Gram. Isetyenziselwa ukunyanga izifo ezosulelayo ezichasene ne-penicillin kwaye inovelwano kule mveliso. Njengokuxinisa kwengulube, inyumoniya, isifo samathambo, ii-erysipelas, ubomvu, tyheli kunye nebala elimhlophe leehagu. Ukongeza, ineempembelelo ze-antipyretic kwihagu.
ILincomycin sisibhengezo se-bacteriostatic esincinci esingabonakaliyo seqela le-lincosamide, elisetyenziswa kwizifo ezibangelwa yintsholongwane ye-anaerobic kunye ne-gram eyi-aerobic bacteria enobuthathaka.
staphylococcus spp kunye ne-streptococcus spp. I-Lincomycin isetyenziswa kunyango lwe-osteomyelitis ngenxa yokungena kwayo kwiiseli zethambo
Isibonakaliso esiphikisayo ekusebenziseni i-lincomycin yimeko ethile ye-hypersensitivity kwi-lincomycin. Ukuphazamiseka okunzima esiswini kunokubakho emva kolawulo lomlomo lwe-lincomycin ukuya emivundla, hamsters, Guinea-iihagu kunye namarhengqa. ILincomycin akufuneki inikezwe ngamahashe, njengoko inokubangelwa kakhulu sisifo sokudakumba kunye nesifo esibangelwa sisifo esibuhlungu kakhulu
Ukusetyenziswa kunye nomthamo:
Intramuscular: nganye kwi-BW yehashe yeenkomo ihashe 0,05 ~ 0,1l, igusha yehagu, kunye ne-0.2ml yenja kanye ngemini, ukugula kakhulu kuyaqhubeka kwiintsuku ezi-2 ~ 3.
I-Intravenous: nge-kg nganye ye-BW yemfuyo eyi-0.05ml ~ 0,1ll, igalelwe amanzi enaliti okanye amanzi eglucose (Intravenous, 1: 2 ~ 3 / drip, 1: 10 ~ 15) nokulawula isantya somthamo.
iihagu iintsuku ezi-2
I-100ml / vial * 40vial / ctn
Edlulileyo: ILincomycin kunye neSpectinomycin sindano 5% + 10%
Okulandelayo: I-Sulfadiazine Sodium kunye ne-Trimethoprim Injection 40% + 8%
I-Sulfadiazine Sodium kunye ne-Trimethoprim Injection ...